elderly people – Healthy Life Journal
အသက်ကြီးသူများ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်သည့် အကြောင်းများ
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အရင်တုန်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကို ငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေအနေနဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေလို ကြွက်သားထုထည်အားကောင်းဖို့၊ ခွန်အားရှိဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါရဲ့ ။ ဟားဗတ်လေ့လာမှုတွေက အရင်ကရှိခဲ့တဲ့ အယူအဆတွေကို ဖယ်ခွာလိုက်ဖို့ သုတေသီတွေရဲ...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုကီနာဝါကျွန်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အသက်ရှည်စေတဲ့ နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိုကီနာဝါ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ကင်ဆာရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်ရောဂါတွေနဲ့ သေဆုံးနှုန်းအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးအားလုံးအတွက် ပျမ်းမျှသက်တမ်းက အနည်းဆုံး ၆၅ နှစ်တော့...
—–၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အရပ်ထဲမှာ ပြောပြောနေကြတဲ့ လူကြီးရောဂါဆိုတာ ဘာကိုခေါ်ပါသလဲ ဆရာ။ (အသက်သိပ်ကြီးတဲ့လူတွေ အိပ်ရာထဲလဲပြီဆိုရင် လူကြီးရောဂါလို့  ပြောတတ်ကြလို့ပါ။) A. လူကြီးရောဂါလို့ ဆိုရာမှာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။...
———၊ ကိုထက် ၊——— အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ စိမ့်ချာလီမှာနေထိုင်တဲ့ ဗာဂျီနီလိုင်တ်နာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ အသက် ၁၀၄ နှစ်ပြည့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လူအများစုက အသက်ရှည်ဖို့အတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားတွေ ပြုလုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုကြပေမယ့် အဘွားလိုင်တ်နာ အခုအချိန်အထိ သက်ရှည်ကျန်းမာနေတာဟာ သင်ယူလေ့လာမှုတွေ၊...